Grab Pay ခရီးစဉ်တွေမှာ ခရီးသည်တွေထံက Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေလက်ခံနိုင်ပါပြီ | Grab MM
Grab Pay ခရီးစဉ်တွေမှာ ခရီးသည်တွေထံက Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေလက်ခံနိုင်ပါပြီ
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ခရီးသည်တွေက အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သာမန် Cash နဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာ5Stars Rating သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူ ခရီးစဉ်ကြေးထက်ပိုတဲ့ အပို Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေပါ ပေးခဲ့တာကို မိတ်ဆွေတို့ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Grab Pay နဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာတော့ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အပို Tip ကို လက်ခံရယူဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါကြောင့် Grab Pay နဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာ အပို Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) ကိုပါ လက်ခံနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်မှာ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Grab Pay ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွင်း အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ခရီးသည်က Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေကို App ထဲကနေ လက်ခံရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်း အမေးအဖြေကို အောက်ဆုံးတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်*
App အတွင်းဖော်ပြချက် (Home, Cash Wallet နှင့် Job Details)
မိတ်ဆွေကို ပေးခဲ့တဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေကို နေ့စဉ် မနက် ၁၂နာရီမှ ည၁၂နာရီအတွင်း ၂၄နာရီတိုင်းမှာ တစ်ကြိမ်တွက်ချက်ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကို ခရီးစဉ် တစ်ခုချင်းစီအတွင်း ပေးခဲ့တဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေကိုလည်း Cash Wallet ရဲ့ Transition History မှာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Job Detail မှာလည်း Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) ဆိုပြီး ဖော်ပြထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
History Page အတွင်း ကြည့်ရှုပုံ
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ History Tab ကနေတစ်ဆင့်လည်း နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်ရရှိထားတဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေသာမက Partner Statement ကနေတစ်ဆင့်လည်း အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။
အပတ်စဉ် Partner Statement တွင် ဖော်ပြချက်
တစ်ပတ်အတွင်း ရရှိထားတဲ့ Tips တွေကို မိတ်ဆွေရဲ့ အပတ်စဉ် Partner Statement မှာ တစ်ကြောင်းချင်းစီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
မေး : ကျွန်တော့်ကို Tip Money (ဘောက်ဆူး) ပေးလိုက်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ဖြေ : သင်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွင်း Tip Money (ဘောက်ဆူး) ရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် ရရှိခဲ့တဲ့ ငွေကို History Tab၊ Job Details၊ Cash Wallet နဲ့ အပတ်စဉ် Partner Statement တွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မေး – ယာဉ်မောင်းတွေကို ပေးတဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) ငွေသားကနေ Grab က ကော်မရှင် ဖြတ်တောက်မှာလား?
ဖြေ – ဖြတ်တောက်မှာမဟုတ်ပါ။ ခရီးသည်ပေးတဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) ကို မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ရာနှုန်းပြည့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်ကို Tip ပမာဏထဲက ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းပြုမှာမဟုတ်ပါ။
မေး : Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) ငွေတွေကို ဘယ်လိုလွဲမလဲ?
ဖြေ : ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးလို့ ခရီးသည်က ပေးတဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) ဟာ သင့်ရဲ့ Cash Wallet ထဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ကျွန်တော့်ကိုပေးတဲ့ Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေကို မမြင်ရဘူး?
ဖြေ : သင့်ရဲ့ ယာဉ်မောင်း App ကို Update လုပ်ပေးပါ။ လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Driver App အတွင်းမှာတင် Tip Money (ဘောက်ဆူးငွေ) တွေကိုခွဲခြားပြီး မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းချင်းစီမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ပမာဏကိုကြည့်ရှုဖို့ အပတ်စဉ် Partner Statement အတွင်းမှာ အပြည့်အစုံကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မေး : Cash ခရီးစဉ်အတွင်း Tip ကို တောင်းလို့ရမလား?
ဖြေ : Tip ပေးခြင်းမပေးခြင်းဟာ ခရီးသည်နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဆုကြေးမျျိုးကို ထပ်တလဲလဲရဖို့ စောင့်ဆိုင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေခရီးသည်တစ်ယောက်ကို Tip Money ပေးဖို့ တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ မကြိုက်တဲ့ ခရီးသည်နဲ့တွေ့ရင် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေယာဉ်မောင်းတို့အတွက် Grab Pay ခရီးစဉ်တွေမှာ Tip Money တွေ လက်ခံရယူနိုင်ပြီဖြစ်လို့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး Rating တွေ၊ Tip Money တွေ ရယူလိုက်ကြပါစို့။